TIGRAY - Warbixin cusub oo dhawaan laga daabacay mareegta The Globe and Mail, ayaa daaha ka qaadday baaris ku saabsan gabood-fallo ay askar Soomaaliyeed ka geysteen gobolka Tigray bilihii hore ee dagaalka u dhaxeeyay Maamulka Abiy Axmed iyo Jabhadda TPLF.
Warbixintu shaki ma galin in ciidamo Soomaali ah ka dagaallameen Waqooyiga Itoobiya, oo baarista ayaa lagu wareystay dad dhibaato ka sheeganaya askarta Soomaaliya, kuwaas oo la sheegay in loogu labbisay dharka ciidamada Ereteriya.
Baaritaanka The Globe, wuxuu sii baritaaray xogihii ay Keydmedia Online, hore u tabisay ee ku addanaa isbahaysi milatari oo qarsoon oo u dhexeeya Itoobiya, Eritera iyo Soomaaliya, kaas oo la yabyabay dhamaadkii 2018, hayeeshee, Abiy, Afwerki iyo Farmaajo ku sheegeen is-dhex-gal dhaqale.
Si rasmi ah ayay saddexda dawladood u beeniyeen jiritaanka isbahaysiga ciidan, waxayna Soomaaliya wax kama jiraan ku tilmaantay in ciidamo joogay Ereteriya la geeyay gobolka Tigray.
Hayeeshee, baaritaanka The Globe ayaa markii ugu horreysay faah faahin dheer ka bixiyay dilal dad rayid ah ay u geysteen askar Soomaali ah oo gacan saar la leh ciidamada Eritrea ee ku suganaa gobolka.
52 jir beerallay ah oo lagu magacabo Gebretsadik, kana soo jeeda xaafadda Zebangedena ee waqooyi-galbeed ee Tigray, ayaa The Globe u sheegay in waddooyinka tuuladiisa ay daadsan yihiin meydadka wadaaddo madaxa laga guray dhamaadkii 2020, dhowr toddobaad ka dib billaabashadii dagaalka.
Wuxuu sheegay in Askar Soomaali ah ay ka barbar dagaallameyeen ciidamada Ereteriya ee tuulada qabsaday, “waxay beegsadeen kaniisado, waxay dileen wadaaddada, waxay u gowraceen sida digaagga”, ayuu u sheegay The Globe.
Wuxuu sheegay in Askarta Soomaaliya iyo Ereteriya ay tuuladiisa ku sugnaayeen illaa dabayaaqadii bishii Febraayo, xilligaas uu isagu naftiisa ula baxsaday kaymaha iyo buuraha ku xeeran Zebangedena, si uu uga badbaado duullaanka.
Sida lagu xusay warbixinta, Globe waxay la hadashay dad badan oo ka badbaaday dagaalka, kuwaas oo goobjoog u ahaa xasuuqa ka dhacay lix tuulo oo Tigray ah, halkaas oo ay joogeen ciidamada Soomaaliya intii u dhaxaysay December, 2020 iyo dabayaaqadii Febraayo, 2021.
La-wareystayaasha ayaa sheegay in ciidamada Soomaalida ay wateen dareeska ciidamada Eritrea, balse ay si cad u garanayeen inay yihiin Soomaali, sababo la xiriira luuqadda iyo muuqaalkooda.
Waxa ay sheegeen in aysan ku hadli karin tigrinya, luqadda lagaga hadlo Tigrayga iyo inta badan Eritera, si ka duwan ciidamada Eriteriyaanka oo luuqaddas si weyn ugu hadla, sidoo kale, waxay goobjoogayaashu xuseen ay ciidamada Eritrea, dadka qaar u sheegeen in ay la socdaan askar Soomaali ah.
Sannadkii hore, Qaramada Midoobay iyo saraakiil Maraykan ah ayaa sheegay inay heleen xog ku saabsan in ciidamo Soomaali ah ay ku sugan yihiin gobolka Tigray, balse ma jirin caddeymo buuxa oo si guud bannaanka keenayay jiritaanka arinkaas.
Waalidiinta Soomaaliyeed ayaa sanadkii hore dhowr banaa- baxyo ka dhigay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya, iyagoo ka cabanayay in wiilashooda lagu amray inay ka dagaallamaan Tigray-ga kadib markii tababar ciidan loogu diray dalka Eritrea.
Ilaa 10,000 oo askari oo Soomaali ah ayaa la geeyey Tigray-ga, sida ay sheegeen saraakiil isugu jira howl-gab iyo kuwo hadda shaqeeya ee Itoobiya oo la hadlay The Globe. Warbixinta waxaa lagu xusay in boqollaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya lagu dilay dagaalka, muddada ka holcayay waqooyiga Itoobiya.
Sida laga soo xigtay saraakiishii hore ee Itoobiya, ciidamada ugu badan ee Soomaalida ayaa ka soo tallaabay xadka Eritrea oo galay galbeedka Tigray toddobaadyadii ugu horreeyay ee dagaalka.
"Shaki la'aan waxay ka qaybqaateen dagaalka," ayuu yiri Gebremeskel Kassa, oo ahaa madaxa shaqaalaha ee maamulka kumeel gaarka ah ee Tigray kaas oo ay dowladda Itoobiya magacawday ka dib markii ay la wareegtay gacan ku haynta gobolka bilihii hore ee dagaalka.
Gebremeskel Kassa, wuxuu sheegay in muran siyaasadeed iyo gadood ka dhashay gudaha Soomaaliya ayay sababeen in askartii Soomaaliya dib loogu celiyay Eritrea, isla-markaana dhamaystireen bixitaankooda bishii March.
Inkastoo ay wali yartahay xogta ciidanka Soomaaliya ee la geeyay Tigrayga, balse dadka badbaaday ayaa u sheegay The Globe in ciidamada Soomaaliya ay boqolaal qof oo rayid ah ku xasuuqeen tuulooyinka ay maamulaan ciidamada Eritrea.
Berket, oo ah 32 jir beeraley ah oo ku nool tuulada Mai Harmaz, ee gobolka Tigray, wuxuu sheegay in Ereteriyaanka ay dadka su'aalo weydiinayeen ka hor inta aysan dilin, hayeeshee, kuwa Soomaaliya ay soo gaarto u khaarijinayeen, wuxuuna xusay in dileen 76 jir ay daris ahayeen.
Kibrom, oo ah nin 37 jir ah oo ka cararay tuulada Hamlo bishii Janaayo, ayaa isna sheegay in maalin kasta ay ciidamada Soomaaliya tuuladiisa ku dilayeen dad rayid ah.
Kibrom, wuxuu sheegay in askarta Soomaalida ay degeen Kaniisadaha, isla-markaana ay dilayeen qof kasta oo dhanka kaniisadda soo aada.
Farmaajo, Fahad Yaasiin iyo Xasan Cali Khayre, ayaa ah saddexda shaqsi ee sida gaarka iskula ogaa in ciidamada loo diro Ereteriya, waxayna Kooxda waqtigu ka dhamaaday wali diiddan yihiin in inta ka hartay dib loogu soo celiyo dalka.